विनयले हल्लाउन सकेनन् कालेबुङः आएनन् पुराना नेता, नयाँलाई प्राथमिकता – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsविनयले हल्लाउन सकेनन् कालेबुङः आएनन् पुराना नेता, नयाँलाई प्राथमिकता
विनयले हल्लाउन सकेनन् कालेबुङः आएनन् पुराना नेता, नयाँलाई प्राथमिकता
November 7, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
प्रज्ज्वल छेत्री / कालेबुङ,7नोभेम्बर
कालेबुङ अझसम्म पनि राजनैतिक रूपमा देखिने गरी हल्लिएको छैन। विनय तामाङ, अनित थापाहरूले साङ्गठानिक विस्तारका निम्ति कालेबुङलाई पूर्ण रूपमा फोकस गरिरहेका छन्। यद्यपि कालेबुङका गोजमुमोका पुराना अनि प्रभावशाली नेताहरू समूहबाजदेखि अलग्गै बसिरहेका छन्।
कालेबुङका मोर्चाका नेताहरू न त विमल गुरुङको वकालत गरिरहेका छन् न त विनय तामाङहरूलाई नै खुलेर समर्थन जनाइरहेका छन्। उनीहरू केवल अहिलेको स्थितिलाई टाडैबाट हेर्न चाहन्छन्। जबदेखि विनय तामाङले जीटीए चेयरमेनको पदभार सम्हाले त्यसबेला कालेबुङमा मोर्चाका धेरजसो नेताहरू विनय समूहमा पस्ने हल्ला थियो। तर अहिले गोजमुमोका पुराना नेताहरू मौन छन्।
कालेबुङमा 13 जना पूर्व सभासद् छन्। उनीहरूमध्ये केवल कल्पना तामाङ मात्र विनय समूहमा छन्। बाँकी 12 जना पूर्व सभासद् चुपचाप छन्। यीमध्येका पूर्व सभासद् सामुएल गुरुङ खुलेर विनय तामाङहरूसित जोडिसकेका थिए। तर पछिबाट फेरि सामुएल गुरुङले विमल गुरुङ पक्षमा वकालत गर्दै विनयहरूलाई जीटीए त्याग्ने सुझाउ दिए।
त्यसपछि सामुएलले विनयको साथ छोडेपनि अथवा विनयले सामुएलको साथ छोडेपनि कुरा एउटै भयो, सामुएल गुरुङ विनयपन्थी बाहिर भए। पूर्व सभासद्हरू विनय तामाङको साथमा गएका छैनन्, न त गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला समिति नै विनयको साथमा गएको छ।
गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष आरबी भुजेल, सचिव कुमार चामलिङहरूलाई केही महिना अघिसम्म विनयपन्थी नेताहरूको लहरमा जोडेर हेर्ने काम हुन्थ्यो। तर उनीहरू पनि अहिलेसम्म विनय नेतृत्वमा रहेको गोजमुमोमा पसेनन्। विनय समूहसित जोडिएका गोजमुमोका पुराना चिनिएका अनुहारहरू भनेको नोर्देन लामा, विनय घिसिङ, गायत्री मुखिया, विदुर राईहरू मात्र छन्।
कमिटीमा किन गोजमुमोका पुराना अनि प्रभावशाली नेताहरू छैनन्? भन्ने प्रश्नमा विनयको जवाब यस्तो छ-‘अहिले धेरै नेताहरू भूमिगत् छन्। कति यहाँ बसेपनि उनीहरू निष्क्रिय छन्। भूमिगत् बसेर पार्टी चलाउन सकिँदैन। पार्टीलाई मजबुत र सशक्त बनाउन कमिटी गठन गरिएको हो।’
एकातिर गोजमुमोका पुराना नेताहरूको मौनता अनि अर्कोतिर साङ्गठानिक विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका विनय तामाङले अन्ततः पार्टी विस्तार गर्न धेरै नयाँ अनुहारहरू लिएर दुई दिनअघि कालेबुङ जिल्ला कार्यकारी समिति गठन गरिसकेका छन्।
अब नवगठित गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला समितिको फोकस् भनेको कालेबुङमा विनयपन्थी गोजमुमोको शक्ति प्रदर्शन गर्नु हो। आगामी9नोभेम्बरका दिन कालेबुङ मोटर स्ट्याण्डमा हुने शक्ति प्रदर्शनले नै कालेबुङमा विनयपन्थी गोजमुमोको वास्तविक वर्चस्व कति हो? भन्नेकुरा तय गर्नेछ।
कालेबुङमा विनय तामाङले आफ्नो वर्चस्व बनाइराख्न कालेबुङ नगरपालिकासित पनि बारम्बार सम्पर्क बनाइरहेको छ। हालैमा पनि एउटा होटलमा कालेबुङका नगरपार्षद्हरूलाई लिएर एउटा बैठक सम्पन्न भएको सूत्रले जनाएको छ। तर अझसम्म पनि दार्जीलिङ, खरसाङसरह कालेबुङ नगरपालिका बोर्डका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विनयप्रतिको झुकाउ सार्वजनिक गरेका छैनन्।
‘जीटीएसित नगरपालिकाले जस्तो तालमेल राख्नुपर्छ राख्छौँ’-भन्दै दुइमुखे नीतिभित्र कालेबुङ नगरपालिका अल्झिरहेको स्थिति छ। ‘पश्चिम बङ्गाल नगरपालिका ऐनअनुसार बोर्ड गठन भएको6महिनापछि मात्र फेरबदल गर्न सकिन्छ। कालेबुङमा नगरपालिकाको बोर्ड गठन भएको छ महिनाको मियाद 29 नोभेम्बरका दिन पूर्ण हुँदैछ’, 29 नोभेम्बरपछि कालेबुङ नगरपालिकाले आफूहरूलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गर्दै विनय तामाङले भनेका छन्, ‘29 नोभेम्बरपछि के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ।’
दार्जीलिङ, खरसाङमा जसरी नगरपालिकाका पार्षद्हरूले खुलेर समर्थन जनाइसकेका छन् त्यस्तो परिस्थिति कालेबुङमा अझ पनि बनिएको छैन। यसैले विनय तामाङले अझ पनि कालेबुङ नगरपालिकाको बोर्डलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गर्न परिरहेको स्पष्ट छ। स्पष्ट अडान कालेबुङका विधायिका सरिता राईको पनि छैन।
विधायिका सरिता राईको केही समयअघिको वक्तव्यहरूलाई हेर्ने हो भने उनको झुकाउ विनय तामाङहरूसित नै देखिन्थ्यो। तर आजसम्म पनि कालेबुङकी विधायिकाले विनय तामाङहरूलाई समर्थन गरेकी छैनन्। मोर्चाका पुराना प्रभावशाली नेताहरू, कालेबुङ नगरपालिका, कालेबुङ विधायिका, पूर्व सभासद् सबै यतिखेर चुपचाप छन्।
तरै पनि केही भूमिगत् नेताहरूले भने विनय तामाङ समूहसित बारम्बार सम्पर्क स्थापित गरिरहेको खबर छ। ‘धेरै नेताहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिरहेका छन्। जनतामा राम्रो छबि नभएका नेताहरूलाई हामी नेतृत्वको जिम्मा दिन सक्दैनौँ। नयाँ अनुहार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। नयाँ अनुहार र नयाँ सोच लिएर हामी काम गर्न चाहन्छौँ’-विनय तामाङपक्षका नजिकको स्रोतले भनेको छ, ‘गोजमुमो पार्टीको सबै कमिटीहरूलाई फेरबदल गरेर पार्टीलाई नयाँ तरिकाले अघि बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो।’
मानव उत्थान सेवा समितिको आयोजनामा सद्भावना सम्मेलन
युवाहरूमा खेलप्रति प्रोत्साहन जगाउँदै भलिबल टुर्नामेन्ट